Kulesi sihloko uzofunda mayelana carburetor Vaz-2101. Lona isici eyisisekelo uhlelo fuel injection. Futhi nezinkinga umshini emotweni lapho kuhlanganiswa khona umoya nomusi kaphethiloli kakhulu. Ngaphezu kwalokho, akubona bonke uyazi indlela yokwenza ukulungiswa kanye izinguquko. amakhosi Good ngezinye izikhathi ngosuku umlilo ayikwazanga ukutholakala. Yiqiniso, ngaphambi kokuba isono ohlelweni umjovo, kubalulekile ukuba uqinisekise ukuthi uphumile emgqeni ke. Ngenxa yokuhluleka ngesikhathi ukushesha, eside injini isiqalo, kuba msebenzi onzima kungadalwa hhayi kuphela eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa ohlelweni fuel, kodwa futhi ku ukuthungela.
On izimoto Vaz uchungechunge zakudala, ikakhulukazi, ngokuthi model of 2101, setha izinhlobo eziningana carburetors. Ngaphakathi them nanso are umehluko, ezifana ubukhulu Imibhobho esemzimbeni, khona umqondisi cleaner. Uma sikhuluma penny carburetor ke kufanelekile obandayo kuphela injini esetshenziswa kule imodeli imoto. Isizathu salokhu wukuthi timer isetshenziswa ngaphandle umqondisi cleaner. imishini Okuningi yesimanje anemisila ukuthungela izinhlelo lapho distributor ine ukulungiswa esebenzisa cleaner. Futhi akusiwona nje mayelana BSZ, kodwa futhi amaphuzu contact (zakudala). Esimeni semakhaya igalaji eyayingakwenza ukuze iqhube ukugcinwa kanye carburetor ukulungiswa kunzima ngempela, ngoba idinga khona hhayi kuphela amathuluzi, kodwa futhi ulwazi nokuqonda isimiso yokusebenza kohlelo umjovo. Kodwa okubaluleke kakhulu, udinga ukwazi ukuthi wena yokuxhuma ohlelweni carburetor nophethiloli.
carburetor uhlelo "penny"
Kodwa ungakwazi ngezandla zakho ukuba ubambe idling ngaphandle nenkinga, uhlanze Imibhobho esemzimbeni, ongaboni ukuhlola isimo i-elementi ezifana kuyashesha futha, nokuziphatha esikhundleni uma zokugwema ukuphuka. Ungase futhi ushintshe yonke gaskets, O-amasongo, ukuhlanza iziteshi fuel ukuze abangele uhlelo umjovo esimweni saso esivamile. Kuyaphawuleka ukuthi zonke izinguquko akufanele bathathe indawo ngandlela-thile, futhi ikhumbula iphesenti CO 2 ohlelweni qeda. Kufanele kuqashelwe ukuthi carburetor Vaz-2101 iqukethe uhlelo iflothi elikuvumela ukuba wokuqhubeka ezidingekayo uphethiloli, kanye esikhiqiza ukulungiswa yayo. Kunonophisa futha, main metering uhlelo, indlela ekonostat idling ukulungiswa - ngayinye yalezi izinhlelo ukukhuluma okwengeziwe.
Aweshubhu ezingeni ukulungiswa likaphethiloli indlela
Futhi kufanele kuqale ukwakhiwa iflothi. Ukuze silondoloze izinga evamile uphethiloli liyadingeka iflothi indlela, okuyinto lihlelwe ekamelweni eponymous. Uma kukhona okuncane kakhulu noma kakhulu ezingeni elikhulu, motor ngeke isebenze kahle. Ngokuvamile, lokho kwehluleka kwenzeka uma kukhona ukuvuza e-valve inaliti. Kuleso simo, uma usebenzisa uphethiloli eliphansi, liqukethe ukungcola, carburetor Vaz-2101 uzoqala baba avimbekile ngokushesha. Ukungcola uthole ohlelweni carburetor futhi wenza ucingo izimbobo. Ngakho-ke, kufanele uhlole ngokucophelela zonke fuel, esikhundleni izihlungi, bese wenza imvume valve. Uma kudingekile, ulungise izinga uphethiloli ekamelweni iflothi.
qala futhi Solenoid uhlelo valve
ngokuvamile carburetor "penny" uhlelo eziphukile uqalisa futhi idling kakhulu. Uma damper emoyeni ayivaliwe ngokuphelele phakathi ekuqaleni emakhazeni, uqale-ke kuyoba nzima kakhulu. Yiqiniso, abanye Jets carburetor lokkhu ivimbekile. Kulokhu, kuzosiza yokuhlanza ephelele. Ukuze balahle zonke izinkinga, kubalulekile ngokuphelele uhlanze actuator emoyeni damper. Futhi uma kudingekile lokulawula actuator ukuze igebe phakathi carburetor odongeni evamile futhi ichopho ngqo. Esimweni lapho idling injini ungaziki siqala, okokuqala ezidingekayo ukuze sifeze ukuhlola kwe-valve kagesi. Ikakhulukazi, ngezinye izikhathi iphele voltage okuyinto enikeziwe kusukela inkinobho ukuthungela mshini. Ukuze kuhlole, wire ngokwanele ingxenye ukuxhuma contact APC ne omuhle ukugcina ibhethri. Uma kungenjalo chofoza lapho yokuxhuma okuphakela amandla, le divayisi uyaphakama. Yingakho kubalulekile ukuba uyishintshe. Uma kukhona ngokuchofoza, kubalulekile ukuba uyasikrufulula valve Solenoid. Khona-ke uhlanze wesiteshi umlomo wombhobho.
Ngokufanayo amisiwe futhi carburetor entsha. uhlole ngokucophelela indlela le nqubo kwenzeka. Ukuze wenze ukulungiswa of idling, udinga ukwazi ukuthi ematfuba abaningi kufanele athuthukise injini kule modi. Udinga sifinyelele ngesilinganiso esingaba 850 ekuvukeleni ngomzuzu. Ukuze ulungise isikulufa enikeziwe zokwandisa nokuthuthukisa ikhwalithi ingxube. Okokuqala kudingeka ukushintshanisa amanani isikulufa ukufeza ijubane bokuzisholo. Khona-ke, ngokushintshanisa screw quality, ukuze sifinyelele isivinini esiphezulu. Khona-ke uphendukisa screw kanye nenani sinciphile ijubane okuqala 850 ngomzuzu. Khona-ke aphinde aqale ukuba "ukudlala" nge izinga screw. Kuyadingeka ukuba alethe injini kuze kube seqophelweni lapho uqala ukunyakaza. izinguquko Final zenziwa ngokuvala screw izinga ezimbalwa ematfuba ngokubala kwewashi, ukuze injini esebenza kancane kancane ngangokunokwenzeka.
Sicela uqaphele ukuthi abahlanzekile kungenzeka uphethiloli ukuyisebenzisa. Carburetor ngokushesha ngeke baba yize uma kukhona amanyela emkhandweni nophethiloli. Isinyathelo sokuqala ubukele isikhundla mpintsha ku carburetor. Ukuze afeze ukulungiswa kubalulekile ukuthi basuke avuleka ngokugcwele. Hlola isikhundla sabo ngokuvula idrayivu isigwedlo lize lithi khimilili. Ngo ekamelweni eyinhloko kubalulekile ukuthi valve kuvula amamilimitha angu-13. Iphutha kulokhu akuyona ezingaphezu kuka 0.5 angu. Lokhu kulungiselelwa kungashintshwa uma endaweni efanele ukuze agobe antenna aphansi. Ikamelo yesibili kufanele livulwe for lungene 15 kwangu. Iphutha kuyafana ngoba ekamelweni eyinhloko. usayizi Opening kungase kushintshwe kuphela unscrewing induku eyaphenduka isendaweni actuator womoya. I ichopho ekamelweni eyinhloko akawuvuli ngokuphelele, izimpondo phezu iziyisikhombisa ngesikhathi esifanayo kufanele kuqale ngayo uma icindezelwa.
Ngu ligijima stop isigwedlo carburetor kumele ivalwe, lapho ubukhulu ngokomthetho air. Sicela wazi ukuthi uma ukulungisa kuyadingeka ukuthi ngesikhathi evaliwe binda ekamelweni eyinhloko ukuthi ajar ningasoze amamilimitha angu ezingaphezu kuka 0.8. Ukuze wenze ukulungiswa kwe-futha namafutha, ujike isigwedlo izikhathi eziyishumi, okuyinto kulawulwa mpintsha. Ngesikhathi esifanayo uphethiloli ephuma sprayer kumele ohlangana naye beaker ngayo nefunda ngayo ivolumu nesilinganiso okwengeziwe kwenziwe. Inani esiphezulu kufanele kube 8,75 cubic ngamasentimitha. Phawula ukuthi ngaphambi isheke kuyadingeka ukumpompa isigwedlo futha zonke iziteshi ngangokunokwenzeka ukugcwalisa. Qiniseka phakathi zonke ukulungiswa ezidingekayo ukuze bahlole ukuthi Friend le carburetor inaliti valve. Kungcono ukuba bafeze lo msebenzi othini ekhethekile. Ngalo, ungahambisa kuya fuel carburetor ngesikhathi ingcindezi ethile. Futhi ukuqapha ukuthi valve inalidi ikwazi ukumelana umthwalo.
Ukulungisa carburetor Kit
Qaphela ukuthi ukufana okusobala carburetors ukulungisa ikhithi zingase zishintshe kakhulu. Lapho oshona esitolo ukuthenga kit ukulungisa, kubalulekile ukuba banake hhayi kuphela model of the imoto, kodwa futhi ngohlobo carburetor. Ngamanye amazwi, uma "Solex" ukulungisa ikhithi carburetor "Ozone" wena umane ngeke akwenze. Ngokuvamile yokulungisa Kit pads ezimbili zitholakala phakathi izingxenye umshini emotweni lapho kuhlanganiswa khona umoya nomusi kaphethiloli. Lihlanganisa fuel futhi emoyeni Imibhobho esemzimbeni, dispensers kuyashesha futha, valve inaliti, nophethiloli lemifanekiso, efana a imfimbolo, isiphethu. Lungisa carburetor Vaz-2101 kungenzeka kuphela ngaphansi kombandela wokuthi zonke izakhi Site ukusetshenziswa. Ngaphezu kwalokho, ikhithi ukulungisa kufanele kube izindandatho ambalwa zenjoloba. Sicela uqaphele ukuthi udinga ukuthenga izesekeli yasekuqaleni, okuyinto akhiqizwa ezweni lethu, kunokuba e China. Ngeshwa, lona wamuva zingase zingabi ezinye izakhi ukuthi kumele kuguqulwe ngesikhathi ukukhanda umshini emotweni lapho kuhlanganiswa khona umoya nomusi kaphethiloli. Ngezinye izikhathi banalo izinga babempofu kakhulu futhi kukhona umehluko ngosayizi. Ngakho-ke, ufake nabo nje awasebenzi.
Manje ukwazi izinto eziyisisekelo design futhi silungisa carburetor Vaz-2101. Naphezu eyinkimbinkimbi isihlobo kohlelo, ungenza izinguquko kalula ngokwakho. Yiqiniso, udinga emsebenzini carburetor ukulungisa ikhithi angathengwa ngasiphi esitolo izingxenye auto. babheke ngokucophelela ukuthi yini nje inkampani carburetor efakwe emotweni yakho. Ngemva ukulungisa ikhithi kusukela "Ozone" by "Weber" noma "Solex" ayikwazi ukusethwa, banayo umklamo ehluke ngokuphelele.
A igama elisha ezifuywayo auto umkhakha: Lada engibaziyo
Ishidi Electric - isihluthulelo embhedeni efudumele
Cover phezu ipasipoti ngezandla zakhe. Ibhuku elethusayo: isembozo ipasipoti